Ny herin'ny asa-tanana hamoronana toerana feno fitomboana ara-dalàna. Feimo Design
Home / Interior design / Ny herin'ny asa-tanana hamoronana toerana feno fitomboana ara-dalàna. Feimo Design
2021 / 08 / 02 FisokajianaInterior design 5331 0
Feimo Jun Interior Design Alliance
Mino bebe kokoa noho ny hatramin'izay isika
Ny fanantenana hamerina ny dia
Azontsika antoka kokoa noho ny hatramin'izay
Ny finiavana handroso
Manomboka amin'ny filàna ara-materialy ka hatramin'ny filan'ny fiainana tsara, ny evolisiona tsirairay dia tsy azo sarahina amin'ny andrana vaovao. Taorian'ny folo taona niasana tamin'ny indostria dia niova hatrany ny toeram-piasan'i Feimo, saingy mbola tsy afaka manome fahafaham-po ny ekipa mpamolavola miha matanjaka sy mandray ireo tompon-trano rehetra.
Rehefa avy nodinihina tsara dia nifidy ny toerana tao amin'ny Farihy Swan izahay tamin'ity indray mitoraka ity. Any amin'ny rihana faha 38 an'ny Block F an'ny Azure Business Port no misy azy eo amin'ny distrikan'ny raharaham-panjakana, mifanila amin'ny farihin'i Swan. Eo amoron'ny rano izy io ary manana fomba fijery mivelatra.
Ny Farihin'i Swan dia toy ny fitaratra napetraka ao amin'ny tany manankarena ao Hefei, ary ny farihy feno dia mamelombelona ny tanàna. Io no loharanon'ny famoronana, Li Xiuling, mpanolo-tsaina momba ny famolavolana, dia mampihatra ny tena fiainana amin'ny zavatra niainany. Izy io dia mamorona ity foto-kevitra ara-pivavahana sy mihodinkodina ity ao amin'ny "Office +", Office + Life, Office + Learning, Office + Negotiation ary sehatra hafa, mampihena azy io ho santionany amin'ny birao an-tanàn-dehibe, tontolo iainana, iasana ary ianarana mifanaraka amin'ny fihetsem-po maha-olombelona.
Mandeha ny rivotra sy ny onja, avereno ny fahatsapana ny fombafomba
Amin'ny endriny, ny endrika manjelanjelatry ny Farihy Swan dia namboarina, ary ny takelaka metaly onja rano dia ampiasaina mba hahatsapana ny sehatry ny valindrihana miaraka amin'ny hazavana sy aloka mitsingevana. Rehefa miditra ao amin'ity lavarangana ity ianao dia toy ny mandihy waltz eo ambonin'ny farihy Swan mahafinaritra ianao. Manome anao fahatsapana fombafomba izay mamony miadana amin'ny fotoana sy ny toerana.
Ao ambadik'ity fahatsapana fombafomba tsara tarehy ity dia manamafy ny fahitana endrika tsy manam-paharoa sy ny herin'ny hatsaran-tarehin'ny mpamorona amin'ny maha mpanao asa-tanana matihanina azy. Ohatra, ny ao ambadiky ny Feimologo mifanohitra amin'ireny dia vato beige tsy manam-paharoa portogey nofidian'i Li Xiuling taorian'ny fandinihana sy sosona henjana. Nariany ny haingo kanto ary nodinihiny ny fotony famolavolana lalina kokoa. Tsy fitaovana na lamba fotsiny izy io, fa famoronana, hatsarana sy zavakanto, fahatsiarovan-tena ary fahatsiarovan-tena.
Rehefa fantatsika ny fomba haharetan-tena vao afaka manitatra ny tenantsika amin'ny hafa isika ary miaina mifanaraka amin'izy ireo.
Noho izany, amin'ity habaka ity, isaky ny mandeha ianao ary mihodina dia hanana fahatsapana vaovao ianao. Izy io dia mitazona ny habaka sy ny olona eny amin'ny habakabaka amin'ny toetry ny fitomboana mandrakizay. Na rahoviana na rahoviana dia afaka mihaona amin'ny fiainanao ho avy ianao ary miasa miaraka amin'ny olona vaovao.
Ny fahatsapana ny hatsarana dia mamaritra ny famoronana sy ny firaisan-kina amin'ny endrika.
Tsy toy ny orinasan'ny famolavolana tsotra, manantena izahay fa tsy toerana hiasana fotsiny, fa toerana ahafahanao miditra amin'ny habakabaka, mamita ny fanomezana ho an'ny tontolo ivelany, ary manokana ny asanao sy ny fianaranao, toa ny fahatsapana fa fombafomba mody any an-trano.
Noho izany, na inona na inona safidin'ny drafitra ara-pitaovana na habaka dia manantena izahay fa hanao izay farany vitantsika, ohatra, ny tontolon'ny aloky ny maple alokaloka ao ambadiky ny bara. Na ampiasaina eto na any an-trano, ny zavatra mahagaga indrindra dia lavitra ny vidiny lafo, fa ny hatsarana sy ny hery noforonin'ny endrika kanto.
Betsaka ny olona no tsy mahazo ny famolavolana, mihevitra fa andalana vitsivitsy fotsiny izy io. Raha ny marina, ny dikan'ny famolavolana dia ny famolavolana ny maritrano, ny fampivondronana azy tsirairay avy, ary ny fampisehoana ny mampiavaka ny atitany miaraka amin'ny haingon-trano mety fotsiny, mba hahafahan'ny hazavana sy aloka mikoriana, mihodina ary mitsambikina amin'ny lalao. Tahaka ity efitrano fandraisam-bahiny ity feno fihetseham-po, dia avy amin'ny fanavaozana ny endrik'i Li Xiuling ary farany nahatsapa tao amin'ny firaisan-kinan'i Feimo. Raha lazaina amin'ny teny hafa, mipoitra ny famolavolana.
Manadio ny votoatiny, bitika fa miavaka
Ny velarantany hita eo am-baravarana vy amin'ny alàlan'ny vestibule dia 5mm ihany, ary aorian'ny fanovana endrika tsy voatanisa, fanodinana ary fanarenana, amin'ny fampiharana ny fizotrany, dia manome valiny tsara tokoa izany, izay tokony holazaina fa ny fahakingan'ilay ny milimetatra.
Ny mandalo ity varavarana ity dia toy ny mandalo fotoam-potoana volamena, mamita ny fahatsapana fa fombafomba fanomezana amin'ny fiainana. Avy eo tongava amin'ny faritra fivorian'ny latabatra lava, mandroso hatrany ny fahatsapana ny fombafomba. Azonao atao ny mahita ny valindrihana onja hosodoko hosodoko vita amin'ny volory mampiseho sary hafa samihafa amin'ny zoro samihafa eo ambanin'ny fitsipiky ny hazavana. Ary ireo chandelier manify matevina ireo dia natsofok'ilay tompony tamin'ny tariby vy tao anatin'ny herinandro.
Izy io dia toy ny sambo mitondra ny fahatsiarovantsika folo taona, ny lasa avy taiza ary ny nofinofy hiezahantsika hotratrarina. Ny tena zava-dehibe, ity sambo ity dia mitondra ny herin'ny "asa-tanana", izay no mahavelona antsika.
Mandehandeha eny amin'ny habakabaka, tafiditra ao ny freshness voajanahary. Ny maitso mavitrika, miaraka amin'ireo faritra fialamboly ho an'ny ankizy sy ny latabatra lava, dia manao ny endrika tsy ny famolavolana ihany, fa koa ny tontolo iainana sy iainana isan-karazany miaraka amin'ny fomba kanto.
Ny endrika dia sady hita no tsy hita. Ny endrika amam-bika hita maso dia ny hery fa tsy ny bluff. Ny endrika tsy hita maso dia ny fomba miafina ao amin'ny antsipiriany, ary koa ny fahendrena matihanina sy ny fambolena kanto ny mpamorona ny tenany.
Ny faritra filalaovana ankizy noforonina manokana miaraka amina endrika feno fanoherana fifandonana. Ny zaza dia anjelin'ny tany, ny hatsaran-tarehy rehetra mendrika azy. Ka na aiza na aiza misy antsika dia te-hamela toerana ampy ho an'ny ankizy izahay.
Ny lehibe, ny ankizy ary ny be antitra, ny fandinihana ny famolavolana dia tokony hitovy.
Ilay kristaly tsara tarehy iray ihany, ireo mpandraharaha dia mamadika azy io ho entam-barotra tsy azo tratrarina, fa ny mpanakanto kosa hamolavola azy ho hatsarana sy herin'ny hakingan-tsaina.
Ny fahatsapana diso hoe "mendri-kaja" sy "rendrarendra" dia hahatonga ny olona hieritreritra hatrany fa ny lafo kokoa dia ny "hady". Raha ny marina dia mila refesina daholo ny zava-drehetra. Ny fomba tiantsika hiainana, ny fikatsahantsika ny estetika, dia tokony hamily ny rojom-bika, hanaraka ny fo, hisafidy izay mety indrindra.
Mijery ny farihy, mankafy oksizenina vaovao
Orinasa maro no voafetra amin'ny haben'ny habakabaka na misavoritaka amin'ny zavatra hafa, ary mizara ny anatiny ho takelaka kely. Na asa ara-dalàna na fandraisana ny mpanjifa izany dia toa lamina manokana. Tsy hita maso ny elanelana misy eo amin'ny olona, ​​toy ny hoe mpiara-miasa fotsiny ny tsirairay ary tsy miraika ny fahatsapana ny olombelona.
Izahay dia mamaky ny stereotypes ary tena manala ny tontolo iainana miasa sy madio ary mifampiraharaha ary manambatra ny fahalalam-pomba malalaka, mangarahara, ambany ary tsy mitarika ho amin'ny endrika.
Asehonay ary alain-tahaka mihitsy aza ny tontolon'ny trano fandraisam-bahiny, tsy avelan'ny olona haka tahaka sy hametaka azy ireo, fa amin'ireo tena endriny ireo dia ho hitanao haingana ny aingam-panahin'ny endrika trano. Avy eo, afaka manatsara ny asan'ny trano izahay araka ny filanao. Mandritra izany fotoana izany dia avelao ho lasa resaka ifanaovan'ny mpinamana ny fifampiraharahantsika, ary hamita ny asa sy ny fianarana amin'ny tontolo milamina sy mahafinaritra. Maimaimpoana toy ny ao an-tranontsika manokana, mifankahazo isika, mifanaja ary mifampitondra marina!
Satria tsy misy fenitra voafetra intsony dia azo ovaina amin'ny fomba arivo ny fikorianan'ny hatsaran-tarehy. Noho izany, ny faritra fifampiraharahana tsirairay dia samy hafa, amin'ny fomba ka hatramin'ny fametrahana fanaka, miaraka amin'ny tsipika plaster, sary sokitra, vita amin'ny hazo, fitsaboana boribory ary teboka famolavolana hafa, hamorona toerana sy hafa isika.
Ny hatsaran-tarehy dia tsy azo faritana, fa azo foronina amin'ny endrika. Fantatrao ny hatsarany, mendrika izany!
Ny jiro, haingon-trano ary karazana andian-dahatsoratra miloko eny amin'ny habakabaka no mpitatitra mamaritra ny hatsarana. Ny fanamafisana ny habaka dia ny herin'ny fitehirizana, ny fitambarana fitaovana maro karazana, sns. Raha azonao atao ny mamaky ny habaka dia ho hitanao fa ny aura sy ny asany dia avy amin'ny fahafahan'i Li Xiuling mamorona lanja famolavolana sy ny zavatra niainany tsy tapaka. Mamadika ny fotoana ho maso, traikefa ary fahendrena hanaovana trano vaovao.
Mpanolo-tsaina momba ny famolavolana: mametraka ny laharam-pahamehana amin'ny olona i Li Xiuling ary mitazona ny fikasana tany am-boalohany
Folo taona, namakivaky ny lohasaha izahay ary nahita ny tendrombohitra. Ho an'ny famolavolana tsara, jereo ny marina, mila ny ambany. Amin'ity indray mitoraka ity dia vonona izahay hanandrana fahafaha-manao vaovao, hampiditra ireo loko mifandona rehetra, ireo fiasa tsy azo avela, ary ny fanenjehana zavakanto izay tsy tianay hidina amin'ity toerana 1000㎡ ity. Satria tianay ny famolavolana, dia noforonin'ny endriny isika.
Ny fiaingana rehetra dia tokony ho tonga amin'ny eritreritra ao am-po. Ireo toa kely, tsy mitongilana isan'andro isan'andro, dia hamela ny olona hahita ny dikan'ny fikirizana.
Izahay dia manizingizina amin'ny serivisy fanaingoana manokana, miziriziry amin'ny famolavolana no tany, ary manizingizina ny hitia izay tiantsika. Manantena izahay fa afaka miara-dia aminay eny an-dàlana ihany koa, mioty vokatra tsara kokoa ho anao, mifanena amin'ny fonenanao mahafinaritra!
Previous :: Reinvent The Rustic isan'andro, fiainana mety amin'ny zaridaina an-tanàn-dehibe 丨 LICO Design Next: Tsy maintsy fantatry ny mpamorona ireo fitaovana amin'ny rindrina 9, mendrika ny angonina!
2021 / 08 / 15 5433
2021 / 08 / 15 6011
2021 / 08 / 15 5772
2021 / 08 / 14 6011
2021 / 08 / 14 5193